Xhosa Banking Glossary - Tyme Bank
Kuxa uvula i-akhawunti ka-TymeBank nge-app ka-TymeBank, oya kube uyidawunlowude ku-Google Play, kwi-App Store okanye kwi-AppGallery. Xa uvula i-akhawunti usebenzisa i-app ka-TymeBank, ikhuselekile kwaye inqatyisiwe kuba isebenzisa inkqubo yokuphawula ubuso ukungqinisisa ukuba unguwe ngokwenene.
Ii-kiosk zika-TymeBank zincinci, zezexeshana, zii-booth ezizimeleyo apho unokuvula khona i-akhawunti ka-TymeBank, ulande idebhithi khadi yakho ye-Visa simahla, uphucule isteyithasi sakho wenze nokunye. I-kiosk ka-TymeBank ayiyo-ATM, ngoko awunakho ukutsala okanye ukufaka imali kwi-kiosk. Kodwa ke, ungatsala imali simahla ethilini kwa-Pick n Pay nakwa-Boxer ngekhadi lakho lika-TymeBank.
U-USSD umele “u-unstructured supplementary service data” (iingcombolo zeenkonzo ezincedisayo ezingacwangciswanga). Luhlobo lobuxhakaxhaka bezothungelwano oluhambisa iinkonzo zezemali kwiiselfowuni. Xa udayela inombolo ene-* ekuqaleni kunye no-# ekupheleni, usebenzisa i-USSD.
I-automated teller machine (i-ATM) (umatshini oyithela ozisebenzelayo) ngumatshini owenza ukwazi ukwenza iitranzekshini ezisisiseko zokubhankisha, njengokutsala nokufaka imali, ungakhange ungene ebhankini okanye ungancedwanga yithela yasebhankini. Ungasebenzisa i-ATM yayo nayiphi na ibhanki ukutsala imali kwi-akhawunti yakho ka-TymeBank.
I-electronic funds transfer (i-EFT) (ukugqithisela imali ngekhompyutha) isusa imali kule akhawunti iyise kwenye i-akhawunti ngekhompyutha kusetyenziswa inetwekhi yeekhomputha. Iitranzekshini ze-EFT zikwaziwa njengokubhankisha ngekhompyutha okanye ukubhankisha nge-intanethi kwaye ingenziwa ngokungena ngepaswedi kwiprofayile yakho yokubhankisha kwikhompyutha okanye kwiselfowuni. Ukuze ufumane imali ngokukhawuleza, yenza iintlawulo ze-EFT phakathi ko-8am no-3pm phakathi evekini, ngaphandle kwangeentsuku zeeholide zikawonke-wonke.
I-Saswitch yisistimu yokutshintsha-ntshintsha ekwenza ukwazi ukusebenzisa phantse nayiphi na i-ATM ukutsala okanye ukufaka imali, nokuba ubhalise kweyiphi ibhanki.
Ukufaka imali ngqo
Olu hlobo lokufaka imali lukuvumela ubhatale abasebenzi bakho ngekhompyutha. Emva kokuba kwenziwe i-payroll, wazisa umboneleli-nkonzo wakho wokufaka imali ngqo ngemali emayifakwe kwi-akhawunti yebhanki yomsebenzi ngamnye, aze lo mboneleli wemali efakwa ngqo agqithisele imali kwi-akhawunti yomsebenzi ngamnye ngomhla wokuhlawulwa kwemivuzo.
Ukugqithiselwa kwemali ngocingo
Ukugqithiselwa kwemali ngocinga yeyona ndlela ikhawulezayo yokuthumela imali. Kudla ngokwenziwa kwiimali ezinkulu, ezingahlawulwa rhoqo, kuba kukho iindleko ezibandakanyekayo. Usenokusebenzisa ukugqithiselwa kwemali ngocingo ukuhlawula ababoneleli beemveliso okanye ukwenza idipozithi yesakhiwo okanye yezixhobo zokusebenza.
Amanqaku e-Smart Shopper
La ngamanqaku okuzinikela njengomxumi kwa-Pick n Pay nonokuwazuza xa uswayipa okanye uhlawula ngedebhithi khadi yakho ka-TymeBank kuyo nayiphi na ivenkile esisakhiwo okanye e-onlayini. Ungawasebenzisa amanqaku akho e-Smart Shopper kuye nawuphi na u-Pick n Pay.
Ukungqinisiswa kweempawu zomntu nokuphawulwa kobuso
Ukungqinisiswa kweempawu zomntu kubhekisa kubuxhakaxhaka bezokhuseleko obusebenzisa iimpawu zendalo zomntu, ezifana neefingaprinti, ukungqinisa igama lakhe.
Ungqinisiso lwezinto ezimbini
Ungqinisiso lwezinto ezimbini yindlela yongqinisiso lweekhompyutha ekuvumela ufikelele kwiingcombolo zobuqu wakube uqinisekise igama lakho ngezinto ezimbini ezibubungqina. Umzekelo, xa usenza intlawulo kwi-app ye-TymeBank, uya kufikelela kwi-akhawunti yakho ngokuphawulwa kobuso bakho okanye nge-pin yakho. Uya kuthunyelwa kwane-one-time pin nge-SMS ukuze kuqinisekiswe ukuba nguwe lo mntu ufuna ukwenza intranzekshini.
Inzala kwi-akhawunti yakho yokugcina imali ibhekisa kwisixa semali oyihlawulwa yibhanki ngokugcina imali yakho ebhankini. Inzala ichazwa ngepesenti oyenzileyo ngonyaka ngokugcina imali yakho e-akhawuntini yakho. Ku-TymeBank, ungenza ukuya kutsho kwi-8% yenzala ngonyaka ngemali ekwi-akhawunti yakho ye-GoalSave.
Inzala oyenzileyo ngumlinganiselo wenzala oyenze ngesithuba sexesha elingqalileyo ngale mali uyigcinileyo, kwaye uyihlawulwa ngeziqendu zeentlawulo eziza rhoqo. Umzekelo, ukuba ufake i-R1 000 kwi-akhawunti yakho ye-GoalSave, uya kwenza inzala eyi-R80 kwisithuba esingangonyaka ukuba uwufanele umlinganiselo wenzala ye-GoalSave oyi-8%.
Inzala eqokeleleneyo ithetha nje ukwenza inzala ngemali oyigcinileyo kwanenzala eyenziwa nayiloo nzala yemali oyigcinileyo, ekugqibeleni. Okukokona uqalisa kwangethuba ukugcina imali, kokukokona uza kukwazi ukwenza inzala engaphuzulu.